San Htun's Diary: အလုပ်ရှာခြင်း အနုပညာ - ၂
ဒုတိယဆုရတာက ၃ နှစ်အရွယ် ကလေးအမေ အိန္ဒိယသူ ဆဘီတာ (ကိုယ်တို့ က စားပြီးသားလို့နာမည်ပြောင် ပေးထားတယ်) ။ သူ့ ဘွဲ့ က သင်္ချာ ကလေးအငယ်ရှိပြီး ယောက္ခမနဲ့နေရတာမို့ ကိုယ်တို့ လို ကျောင်းမှာ မအိပ်ရုံတမယ် မနေနိုင်ဘူး ည ၇ နာရီလောက်ဆို ပြန်ရပြီ။ အိမ်ရောက်ရင် တအိမ်သားလုံးရဲ့ညစာ၊ နောက်နေ့ အတွက် မနက်စာ ချက်ရတယ်၊ ကလေးကိစ္စတွေ လုပ်ရတယ် အိမ်ရောက်ရင် စာကြည့်ချိန် မရှိလို့ကျောင်းမှာပဲ စာကြည့်ရတဲ့သူ။ အားတဲ့အချိန်မှာ သတင်းစာပေါ်က quiz တွေက ခဲတံတစ်ချောင်းနဲ့ဖြေနေတတ်တယ် ညဏ်ကောင်းအောင်လို့ တဲ့။ ကလေးနဲ့ယောက္ခမကို ပြုစုရင်းနဲ့ဒုတိယဆုရအောင် ကြိုူစားတဲ့ ဆဘီတာရဲ့အားထုတ်မှုကို လေးစားမိတယ်။ ကျောင်းပြီးတဲ့လူတိုင်း အလုပ်ရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး အလုပ်မရလို့မြန်မာပြည်သွားတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အလုပ်ရတယ်ဆို အားထုတ်မှု၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုနဲ့ကံလည်း လိုသေးတာကိုး။ ကိုယ်က တလခွဲအတွင်း အလုပ်ရပေမဲ့ ၄ လလောက်အထိ အလုပ်မရသေးလို့EPEC ( long time ) နေထိုင်ခွင့်လျှောက်ပြီး အလုပ်လျှောက်ရတဲ့သူလည်း ရှိပါတယ်။ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အလုပ်တွေတင်၊ ဖုန်းတွေဖြေ၊ အင်တာဗျူးအတွက် ပြင်ဆင် တပတ်မှာ အင်တာဗျူးနှစ်ခုလောက် ရှိတယ်။ အလုပ်ရှာနေချိန်အတွင်းမှာ ကျွှေးထားမဲ့ မကြီးရှိနေတော့ အလုပ်လျှောက်တယ်လို့ သာပြောတော အစားအသောက်မပျက်၊ ကိုရီးယားကား အကြည့်မပျက်နဲ့ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာတယ်။ ကိုယ် အင်တာဗျုးက အပြန်လမ်းမှာ အင်တာဗျူးလာဖြေတဲ့ ညီမငယ်လေး ဇာခြည်ကျော်နဲ့ ဆုံလို့ဘယ်မှာအင်တာဗျူးတာလဲ မေးကြည့်တော့ ကုမ္ဗဏီအတူတူပဲဆိုတော့ အင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေ ပေးလိုက်သေးတယ်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တုန်းက same batch ၊ ISS မှာ အင်တန်းအတူတူဆင်းတဲ့ အေးပိုက ဂျာဗားမှ ဂျာဗားတဲ့ အလုပ်ရတော့ .Net နဲ့ ရတယ်။
အင်တာဗျူးတွေက ရေးဖြေ၊ ကွန်ပျူတာနဲ့ဖြေရတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ အလုပ်ရသွားပြီရင် ဘယ်တော့မှ အလုပ်ရပါ့မလဲလို့စိတ်ပူ ဘုရားမှာ ဆုတောင်းနဲ့စိတ်ဖိစီးတာပါပဲ။ NUS Enginering School မှာ အင်တာဗျူးတုန်းက ရည်မှန်းချက်က ဘာလဲမေးတော့ ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းသွားတက်ချင်တယ်လို့ဖြေခဲ့ဖူးတယ်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသို်လ်တက်တုန်းက ကိုယ်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ မျှော်လင့်ချက် ၊ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်တွေ အကြောင်းပြောကြတုန်းက ကိုယ့်အိမ်မက်က နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းတက်ချင်ခဲ့တာတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမှာ ဘယ်မေဂျာတက်ချင်လိုက်တာလို့ တော့ မရှိခဲ့ဘူး။ အမေက မူလတန်းပညာကိုတောင် ပြီးဆုံးခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ သမီးအကြီးဆုံးဆိုတော့ အောက်က အငယ်သုံးယောက်ကို ခါးထစ်ခွင်ထိန်းကျောင်းရင်း စာဖတ်စာရေးတတ်အောင် ကိုယ့်ဘာသာ သင်ယူခဲ့တာပါတဲ့။ ရွာမှာက ညနေဆို ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ အာအက်ဖ်အေ ရေဒီယိုသတင်းတွေ နားထောင်ကြတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသင်နေတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေ နားထောင်ရရင် အမေက သူ့ သမီးတွေကို အဲဒီလို ဖြစ်စေချင်တာတဲ့ ။ မသိစိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးတွေဟာ တခါတရံမှာ အကောင်အထည် ပေါ်လာသလားလို့ ။ ကိုယ်တက်ချင်ခဲ့တာက ISS က မာစတာ MTech Software Engineering ၊ စင်္ကာပူမှာ သုံးနှစ်နေပြီးရင် သွားဖို့စိတ်ကူးထားတာက သြဇီ၊ သွားဖြစ်သွားတာက ယူအက်စ်။ တခါတလေတော့လည်း တွေးထင်မထားတာတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်လာတတ်သလားလို့ ။ စင်္ကာပူကျောင်းဝင်ခွင့်ရတော့ အဖေက သိပ်မလွှတ်ချင်ဘူး သမီးတစ်ယောက်က နိုင်ငံခြားမှာ သမီးအငယ်ကို အနားမှာ ရှိစေချင်ခဲ့တယ်။ အမေကတော့ ပြတ်သားတယ် ပိုက်ဆံကိစ္စကို လုံးဝစိတ်မပူနဲ့ ပျံချင်သလောက် ပျံတဲ့။ အဲဒီတုန်းက နာဂစ်တိုက်ပြီးခါစ စက်ပစ္စည်းဆိုင် တစ်ခုလုံး ဆုံးရှုံး၊ အိမ်ခေါင်မိုးကျွှတ်ထွက် လူတောင် ကံကောင်းလို့မသေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကိုယ် တွေဝေနေတာကိုသိလို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ခိုင်မာအောင် အမေက စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ပေးခဲ့တာပါ။
အလုပ်ရှာတဲ့အခါမှာ စီဗွီဖောင်ပုံစံကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လျှောက်တဲ့သူ အများကြီးထဲကမှ ဖောမတ်ကောင်းတဲ့ စီဗွီလေး၊ သူတို့ လိုချင်တာတွေ နည်းနည်းလောက် ပါရင်ကိုပဲ ပမာဏအရင်ရွေး ပြီးတော့မှ အင်တာဗျူးခေါ်တာကိုး။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း ကောင်းကောင်းရဲ့ စီဗွီလေးက အတော်ကောင်းတယ် သူဆို အင်တာဗျူး အများကြီးရတယ်။ အဲဒီတော့ ဟဲ့ နင့်စီဗွီပေးစမ်းဆိုပြီး သူ့ စီဗွီဖောမတ်ထဲမှာ ကိုယ့်ဟာတွေထည့် ကော်ပီကူးသင့်တာ ကူးပေါ့။ KPMG မှာ အင်တာဗျူးဖြေတော့ အကုန်လုံး ဖြေနိုင်ပါရဲ့မင်း အခုသုံးနေတဲ့ ဂျာဗားက ဘာ version လဲမေးတော့ ကိုယ်မသိဘူး2လာ3းလားလို့ဝါးတားတား ဖြေခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ်သုံးနေတာ ဘာ version မှန်း မသိတဲ့သူကို ဘယ်သူက အလုပ်ခန့် ချင်ပါ့မလဲ။ ကုမ္ဗဏီတစ်ခုမှာ ကိုယ်တို့ ကျောင်းကလူတွေ အင်တာဗျူးဖြေကျတော့ ဘယ်တွေမေးမှန်း သိနေတာပေါ့။ ငါက အီးမေးလ်ထဲက ကူးမယ်ဆိုပြီး မပြင်ဆင်သွားဘူး ဟိုရောက်တော့ no interent ဆိုတော့ ငါ့မှာ မကူးလိုက်ရပါဘူးဟာ ဘာတွေ ဖြေလိုက်မှန်းတောင် မသိဘူးလို့ကိုစိုင်းကပြောရင် အဲဒါ မပြင်ဆင်ထားတဲ့ အကျိုးတွေလေလို့နှက်ကြတယ်။ ကိုယ် ATH မှာ မတော်တဆ အလုပ်ရသွားတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြချင်ပါသေးတယ်။ ATH မှာ ရေးဖြေ ၁ နာရီ သွားဖြေရတယ် ပြီးတော့ ပရောဂျက်တစ်ခု ပို့ လိုက်တယ်။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်က ပရိုဂရမ်းမင်း မကျွှမ်းသေးတော့ သူငယ်ချင်းတွေ အကူအညီနဲ့ဖြေရတယ်။ design page ရေးပေးတာက ယိုးဒယားမှာ ဒီဇိုင်းသင်ယူခဲ့၊ ISS အတူတူတက်ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းဂုရုကြီး ကိုကြီးကျော်။ ကျောင်းပရောဂျက်တွေ လုပ်ကြတုန်းကဆို ဝက်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်းတွေက Firefox မှာအကောင်း Internet Explorer မှာ ယိုင်ထွက်နေလို့ ကတော့ ကိုကြီးကျော်ဆီ ပြေးကြတော့တာပဲ။
Team 12 ASP.Net Project Presentation Day
ကုတ်တင်းကို ကူညီပေးတာက မာစတာနဲ့ISS အတူတူတက်ခဲ့တဲ့ ဘလို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သင်္ဂီဘ စန်းထွန်းရေ data တခုတော့ ဝင်သွားပြီ ရလောက်ပါပြီတဲ့ ADO.Net ၊ Stored Procedure သုံးပြီး ရေးပေးတာပါ။ ကျန်တဲ့ validation ၊ ခေါင်းဆောင် ခရီးသည်ရဲ့ အောက်မှာ တခြားခရီးသည်တွေ ထပ်ထည့်တာကိုတော့ နှစ်ရက်လောက် အချိန်ယူပြီး ရေးလိုက်ရပါတယ်။ နောက် second round interview ထပ်ခေါ်တယ် အိုင်တီဒါရိုက်တာ ပြင်သစ်ကြီးက မင်း ဒီအလုပ်ရမယ်လို့ထင်သလားလို့ မေးတော့ ဒီအင်တာဗျူးက ကိုယ့် ၁၃ ခုမြောက် ၁၃ ကို ကံမကောင်းတဲ့နံပါတ်လို့ယူဆကြပေမဲ့ ကိုယ့်အတွက်တော့ ၁၃ က လပ်ကီးနံပါတ်လို့ဖြေလိုက်တော့ မင်းက အယူသီးတဲ့ မိန်းကလေးပါလားတဲ့။ တကယ်တော့ ကိုယ်က အယူမသီးတတ်ပါဘူး အလုပ်က အော်ဖာပေးလာတော့ ပျော်လိုက်တာ။ အော်ဖာစာရွက်မှာ လက်မှတ်ထိုးမှာက ညနေစောင်း နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးဆိုပြီး မနက်ပိုင်းမှာ အင်တာဗျူး သွားလိုက်သေးတယ်။ ရေးဖြေ တစ်နာရီ ဖြေပြီး အင်တာဗျူးတော့ အော်ဖာရနေပါပြီ ဒါ ကိုယ့်ရဲ့ နောက်ဆုံး အင်တာဗျူးပါလို့ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီအလုပ်က အော်ဖာပေးလာပေမဲ့ လစာက ATH ကပေးတာထက် နည်းနေလို့ATH အော်ဖာကို လက်ခံလိုက်တယ်။ ATH က တကယ်ပျော်လို့ ကောင်းတယ် လစာလည်းမဆိုး၊ ဘောနပ်စ်တွေလည်းရ၊ နို်င်ငံခြားခရီးတွေလည်း သွားရတယ်။ ဒါမာဝီ၊ ဝင်နာတို၊ ထိန်ထိန်၊ ဇေ၊ မွန်နာ ကိုယ်တို့lunch group လေးက တကယ်ပျော်ဖို့ ကောင်းတယ်။ နောက်တော့ သိရတာက ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ထွက်၊ ကိုယ်နဲ့ISS အတူတူ တက်ခဲ့တဲ့ စိုးမင်းထိုက်ကို ATH က အော်ဖာကမ်းပေမဲ့ IBM အော်ဖာကို လက်ခံပြီးပြီမို့ATH က ကိုယ့်ကို အော်ဖာကမ်းခဲ့တာပါတဲ့။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ် ATH မှာ တကယ်ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ အလုပ်ပြောင်းရင် လစာတိုးလေ့ရှိတာမို့တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့အခါ အလုပ်တွေ ထပ်လျှောက်ဖြစ်ပါတယ်။ MC (နေမကောင်းခွင့်) ယူပြီး အင်တာဗျူးတွေ သွားတယ်။ SingTel ကဆို သုံးခါတောင် အင်တာဗျူးတယ်။ တခါတုန်းက အင်တာဗျူးအပွိုင့်မတ်လုပ်ဖို့ ကို ကိုယ့်ဖုန်းခေါ်လို့ မရလို့SingTel မှာ လုပ်နေတဲ့ မယမင်းမြင့်ဆီကနေတဆင့် အကြောင်းကြားရဖူးတယ်။ JobStreet ၊ JobCentral မှာ ကြေငြာထားတဲ့ ကျောင်းကြေငြာကို အလုပ်ထင်ပြီး စီဗွီပစ်တင် ပရိုဂရမ်းမင်း စာမေးပွဲဖြေတော့ ဘီရလို့ အောင်။ ကိုယ်တက်ခဲ့တက္ကသိုလ်တွေဆီကနေ Grading ၊ Transcripts လှမ်းပို့ ရမယ်ဆိုလို့မောင်မောင်က ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ကိုသွားပြီး Grading ၊ Transcripts ကို ကျောင်းတံဆိပ်တုံးထုပြီး ယူအက်စ်ကျောင်းကို လှမ်းပို့ ၊ အလုပ်ရှာနေတဲ့ မကြီးက ISS ကိုသွားပြီး ကျောင်းတံဆိပ်တုံးသွားထု ယူအက်စ်ကျောင်းကို လှမ်းပို့ ။ မန်နေဂျာ ဖိလစ်ပို်င်ကြီး ဂျူရောင်းကို recommendation letter ရေးပေးဖို့အကူအညီတောင်းရတယ်။ ဖုန်းအင်တာဗျူး ဖြေပြီးတော့ ယူအက်စ်ကျောင်းအော်ဖာ ရပါတယ်။ ISS ကျောင်းသား တရာကျော်မှာ ၆၀ လောက်က မြန်မာ၊ အားလုံးနီးပါးက ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်က မောင်နှမတွေဆိုတော့ စင်္ကာပူကျောင်းတက်တယ်လို့ သာဆိုတယ် မြန်မာပြည်ကျောင်း တက်ရသလိုမျိုး။ ကျောင်းမှာ ညလုံးပေါက် ပရောဂျက်လုပ်ကြတဲ့နေ့ ဆို လက်ဖက်သုတ် စုစားကြတာ ပျော်စရာကြီး။ ယူအက်စ်ကျောင်းကြတော့ မြန်မာဆိုလို့တစ်ယောက်တည်း၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ မိသားစုလည်း မရှိတော့ ကိုယ့်မှာ တော်တော်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် မချနိုင်ဘူး။ အားလုံးက သွားသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းကြတယ်။
သူငယ်ချင်းဝေက နင့်မှာ တွယ်တာစရာ၊ ငဲ့စရာ ရည်းစားလည်းမရှိ၊ နင့်အဖေနဲ့မကြီးက လိုသမျှ ထောက်ပံ့နိုင်တော့ ပိုက်ဆံကိစ္စလည်း ပူစရာမလို၊ ငါ့သာ နင့်နေရာမှာဆိုရင် ယူအက်စ် သွားကြည့်လိုက်မယ် ကျောင်းပြီးလို့မပျော်တော့လည်း ဒီကုို ပြန်လာပေါ့လို့တိုက်တွန်းတာနဲ့ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းသွားတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းတက်တုန်းက ကြုံရတဲ့ အထီးကျန်ဆန်တာ၊ ပင်ပန်းဆင်းရဲတာ၊ အမေရိကန်စာတွေကို မစားနိုင်လို့အမြဲတမ်း ဗိုက်ဆာနေတာ၊ ရာသီဥတု၊ ဘာသာစကား၊ culture gap အခက်အခဲတွေကို ၂၀၁၁ တုန်းက ကိုယ်ရေးတဲ့ပို့ စ်တွေကို ဖတ်ခဲ့ဖူးသူတွေဆို သိကြပါလိမ့်မယ်။ အဖေနဲ့အမေ ကြိုးစားရှာဖွေကြလို့ကိုယ့်ဘဝမှာ ငွေကြေးအတွက် ပူပင်ရတယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။ နာဂစ်တုန်းက ပစ္စည်းဥစ္စာတွေ ဆုံးရှုံးသွားပေမဲ့လည်း လူမသေ ငွေမရှားလို့သဘောထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ယူအက်စ်မှာ ကြုံတွေ့ ရတဲ့ ပင်ပန်းဆင်းရဲမှုတွေက အများကြီး ဒါကြောင့်လည်း ခံနိုင်ရည် ရှိလာတယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု တိုးလာတယ်၊ strong ဖြစ်လာတယ် ဆိုပါတော့။ ကိုယ်ကြုံရတဲ့ ဒုက္ခတွေ များလှပြီထင်တာ ဒုက္ခသည်တွေကို ကူညီတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းမှာ ဗော်လန်တီယာ သွားလုပ်တော့မှ ကိုယ့်ဒုက္ခက သူတို့ နဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် တကယ့်ကို ပါးပါးလေး။ အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာမရှိ၊ ဝက်သတ်စက်ရုံ၊ ငါးစက်ရုံ၊ မွေ့ ယာစက်ရုံ၊ အာလူးကြော်စက်ရုံတွေမှာ ညဆိုင်းအလုပ်လုပ်၊ အင်္ဂလိပ်စာမတတ်တော့ ကားမောင်းလိုင်စင် ဖြေဖို့ ခက်၊ ယူအက်စ်ဥပေဒတွေကို နားမလည်တော့ အသက် ၈ နှစ်အောက် ကလေးငယ်ကို ဆိုင်ရှေ့ မှာ ခဏထားပြီး ငါးမိနစ်လောက် ဆိုင်ထဲပြေးဝင်ကာ ဈေးဝယ်ပြီးလို့ပြန်လာတော့ ရဲက စောင့်နှင့်နေပြီ။
SA 29 Graduation Day Sept 2, 2009
Post Graduate Diploma in System Analysis (GDip SA)
AD (Application Development) Project Team 2
ဗော်လန်တီယာလုပ်တာ ပိုက်ဆံမရပေမဲ့ ကိုယ့်ဘဝအမြင်တွေ ပြောင်းလဲပြီး ပိုက်ဆံနဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဘဝအသိတွေ ရခဲ့တယ်။ ယူအက်စ်ကျောင်းက နာမည်မကြီးတဲ့ private ကျောင်းပါ Financial Aid ရတော့ ကျောင်းလခ၊ နေစားစရိတ်တွေကို loan ထဲ ပေါင်းထည့်သွားပြီး ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်လုပ်တဲ့ ၂ နှစ်အတွင်း ဆပ်ရပါတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ grading ရပြီး ကျောင်းအကြွေးတွေ ကျေပါမှ ဘွဲ့ ပေးပါတယ်။ အတွေ့ အကြုံရှိပြီး ယူအက်စ်မှာ အလုပ်ရနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေခါ် တစ်နှစ်ကျောင်းတက် နှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပြီး အဝေးသင်တက်။ ကျောင်းသားဖက်က ကြည့်ရင်လည်း ကနဦး ပိုက်ဆံအများကြီး ကုန်စရာမလို ကျောင်းလည်းပြီး အကြွေးလည်းကျေ ယူအက်စ်နှစ်နှစ် လုပ်သက်လည်းရပေါ့။ တစ်နှစ်တက် နှစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ပြီး အဝေးသင်တက်တာကို CPT (Curricular Practical Training) လို့ခေါ်ပါတယ်။ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ကျောင်းသားဗီဇာ F1 ကုန်သွားပေမဲ့ အလုပ်ဗီဇာ စပွန်ဆာပေးမဲ့ ကုမ္ဗဏီမှာ အလုပ်မရရင် လေးဘာသာထပ်ယူပြီး တစ်နှစ်ထပ်တိုးပေးပါတယ် loan တွေ ပိုများသွားတာပေါ့။ ကျောင်းအများစုက နှစ်နှစ်ကျောင်းတက် သတ်မှတ်တဲ့ ခရစ်ဒစ်ပြည့်မှ တစ်နှစ်အလုပ်လုပ်ခွင့် OPT (Optional Practical Training) ရပါတယ် နောက်ထပ်တစ်နှစ် ထပ်တိုးလို့ရပါတယ်။ တစ်နှစ်ကျောင်းပြီးနီးမှာ အင်တာဗျူးအတွက် ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ နှစ်ပတ်သင်တန်းပေးပါတယ်။ ကိုယ့်စီဗွီကို ကျောင်းကို ပေးလိုက်ရင် ကျောင်းက ယူအက်စ်ဖောမတ် နှစ်မျက်နှာစာ ပြင်ပေးပါတယ်။ ယူအက်စ်စီဗွီမှာ ဓာတ်ပုံ၊ အသက်၊ ဘာလူမျိုးဆိုတာ မပါပါဘူး။
အမေရိကန်တွေက ယောကျာ်း၊ မိန်းမမရွေး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေ့ ရှိပါတယ်။ မနီးလွန်း မဝေးလွန်း အကွာအဝေးကနေ ဖွဖွလေး မဟုတ်ဘဲ အားရပါရ နှုတ်ဆက်ရပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းသားတွေ နေ့ တိုင်း အတန်းရှေ့ ထွက်ပြီး လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တာ လေ့ကျင့်ရတယ်။ အင်တာဗျုးသူနဲ့eye contact လည်း အရေးပါပါတယ်။ အမေရိကန်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ကနေ အနံ့ အသက်ထွက်တာ မကြိုက်ကြဘူး။ အင်တာဗျူးသွားရင် တကိုယ်လုံးမှာ ခြေအိတ်အပါအဝင် သုံးရောင်ထက် မပိုသင့်ပါဘူးတဲ့။ ယူအက်စ်မှာ အင်တာဗျူးသူတွေ ပထမဆုံးမေးတဲ့ မေးခွန်းက What is your visa status? ပါ။ F1 ကျောင်းသားဗီဇာဆိုတဲ့ စကားတောင် မဆုံးသေးဘူး ဆောရီး စပွန်ဆာ မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီး ဖုန်းချသွားတော့တာပဲ။ ဒီတော့ work authorization ရှိပါတယ် ဗီဇာကတော့ ကျောင်းသားဗီဇာလို့ဖြေရမယ်လို့သင်ပါတယ်။ ဒီလောက် သင်နေတဲ့ကြားက မင်း ဘာဗီဇာလဲလို့ မေးတော့ အီသီယိုးပီးယားကျောင်းသား ယေဒီက ဖက်ဝမ်းဗီဇာလို့မဆိုင်းမတွ ဖြေလိုက်တော့ ကျောင်းသားတွေ ဝါးကနဲ ရယ်ကြတော့တာပဲ။ ယေဒီနဲ့ ဆုံရင် မင်းဘာဗီဇာလဲလို့စကြတော့တာပဲ။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက Tell me about yourself ပါ နှစ်မိနစ်အတွင်း ကိုယ့်အကြောင်း ခြုံငုံမိဖို့လေ့ကျင့်ရတယ်။ အတန်းရှေ့ ထွက်ပြောရတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေက တိုသွားတယ် မကြားရဘူး ကျယ်ကျယ် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြောပါလို့ညစ်ကြတယ်။ နောက်မေးခွန်းတစ်ခုက What is your strong and weak points ပါ။ အလုပ်ကြိုးစားတာ၊ နည်းပညာတွေ လျင်လျင်မြန်မြန် တတ်မြောက်နိုင်တာ၊ ကလိုင်းရင့်ဆီကက requirement ကောက်ပြီး design ကောင်းကောင်းချနိုင်တာ၊ ကလိုင့်ရင့်တွေရဲ့ပြသနာကို အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြေရှင်းနိုင်တာတို့ ဘာတို့ပြောလို့ ရပေမဲ့ အားနည်းချက်ကျတော့ ခက်သား။ ပျင်းပါတယ်လို့အမှန်အတိုင်း သွားပြောရင်လည်း အလုပ်ခန့် မှာမဟုတ်ပြန်။
မိုင်းဖန်ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ အလုပ်တွေ ရှိနေရင် အစားအသောက် မမှန်တော့ဘဲ အလုပ်ဖိလုပ်လို့ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းတာ သူ့ အားနည်းချက်တဲ့။ သူ့ အားနည်းချက်ကလည်း အလုပ်ခန့် ချင်စရာကြီး။ ဒီလိုပါပဲ တခြားကျောင်းသားတွေဆီက ကောင်းတာလေးတွေဆို ကော်ပီကူးပေါ့။ အင်တာဗျူးတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ဖြေနိုင်ဖို့မဖြေနိုင်ခဲ့ရင်လည်း တက်တက်ကြွကြွ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိတာကို ပြသဖို့လိုပါတယ်။ ကုမ္မဏီတချို့ က ကျောင်းမှာ အင်တာဗျူးလုပ် ကျောင်းသားတွေက ပရိုဂရမ်းမင်းကို ကွန်ပျူတာနဲ့စာမေးပွဲဖြေ ၊ လူတွေ့ အင်တာဗျူးဖြေ ပထမဆုံး အင်တာဗျူးနဲ့တခါတည်း ပထမဆုံးအလုပ်ရသွားတဲ့ ယန်ဇီ၊ ပြောင်၊ အက်စ်စတီရာ၊ ရာဘင်တို့ လိုမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ Algorithm ဘာသာရပ်မှာ A+ ထက်ကျော်ပြီး AHons ရတဲ့ တရုတ်နဲ့ နီပေါကျောင်းသားနှစ်ယောက်ဟာ ပရော်ဖက်ဆာထောက်ခံချက်နဲ့ဂူဂယ်မှာ အင်တာဗျူး သွားဖြေရပါတယ်။ လေယာဉ်၊ ဟိုတယ်စရိတ်ကို ကုမ္မဏီဖက်က အကုန်အကျခံပေးတာပါ။ ဘယ်လိုအင်တာဗျူးလည်း မေးကြည့်တာ့ အဖြေကို ဝှိုက်ဘုတ်ပေါ်မှာ ရှင်းပြရပြီး တဖွဲ့ ပြီးတဖွဲ့တနေကုန် ဗျူးတာတဲ့။ ကျောင်းက job portal ၊ job site တွေမှာလျှောက်၊ စီနီယာတွေဆီ အီးမေးလ်နဲ့စီဗွီလှမ်းပို့ ။ ကိုယ်တက္ကသိုလ်တက်တုန်းက နှုတ်နည်းတော့ ကိုယ့်ကို မသိကြတာ များတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း M3 လို့ ခေါ်တဲ့ မြတ်မွန်၊ အီးစီ သစ်သစ်ကို တကျောင်းလုံး သိကြတယ်။ ကိုယ်က နှုတ်နည်းတဲ့အပြင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမကောင်း ဧည့်သည်လာရင်တောင် ဆင်းတွေ့ ချင်မှ ဆင်းတွေ့ တာ အားမနာတတ်ဘူး။ ယူအက်စ်ကျောင်းမှာတော့ အားလုံးကို နှုတ်ဆက်တယ် မိတ်ဆွေဖွဲ့ တယ် စကားစမြည်ပြောတယ်။ ကိုယ်မသိမကြားဖူးတဲ့ နိုင်ငံတွေက ဓလေ့ထုံးစံတွေ၊ ကိုယ်မသိသေးတာတွေ သိရတယ်။ မိန်းကလေးကို မကြည့်၊ ဘယ်တော့မှ ဟိုင်း ဟောင်းအာယူလို့မနှုတ်ဆက်တဲ့ ဂျော်ဒန်တစ်အုပ်က လွဲရင်။
IA (Internship Attachment) Briefing Day Feb 14, 2009. ISS - NUS
Where am I ? Can you find me in this group ? :)
ဒီတော့ အတန်းထဲမှာ ကိုယ့်ကို မသိတဲ့သူ မရှိဘူး။ ကိုယ်နဲ့ အစေးမကပ်တာဆိုလို့ဒီဗွီပေါက်လို့ယူအက်စ်ရောက်နေတဲ့ အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအပေါ်က အီတရီယာ Eritrea နိုင်ငံသူ အာရီယန်ပဲ ရှိတယ်။ သူ လိုအပ်ရင် ဆူနမ်တို့ ကို အကူအညီတောင်းပြီး ဘယ်တော့မှ မကူညီ၊ သူ့ ရှေ့ မှာ နီပေါလီစကားမပြောနဲ့ လို့ပြောပြီး လူပါးဝတဲ့ အာရီယန်ကို မိုင်းဖန်နဲ့ကိုယ်က ဘယ်တော့မှ ဟိုင်းလို့မနှုတ်ဆက်ဘူး ငဲ့တောင် မကြည့်ဘူး ဆိုပါတော့။ သဘောကောင်းတဲ့ ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ ကတော့ ကူညီမြဲ ၊ အနိုင့်ကျင့်ရင်လည်း ဘာမှ ပြန်မပြောဘူး။ စန်းစန်းလုို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ကို သိကြတော့ ကိုယ့်စီဗွီကို မန်နေဂျာဆီ ပို့ ပေးကြမှာကိုး။ စန်းစန်းဆိုတာ ဘယ်သူပါလိမ့် ကိုယ်တို့ကျောင်းအတူတူ တခန်းတည်းမှာ တက်ခဲ့ကြတယ် ဘုရားရေ သူ့ ကို မသိပါလားဆိုရင် ကိုယ့်စီဗွီကို ဘယ်သူပို့ ပေးမလဲ။ ယူအက်စ်မှာ ပထမဆုံးအလုပ်ရဖို့အင်မတန် ခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကွန်းထရပ်ဆိုရင်တောင် သုံးလပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမြဲတမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်ပြည်နယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အလုပ်မရွေးတော့ အလုပ်ရမြန်တယ်။ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့သူတွေကျတော့ သူတို့ အိမ်ထောင်ဖက်ရှိတဲ့အရပ်မှာပဲ အလုပ်ရမှ ဖြစ်မှာကိုး။ အိန္ဒိယအေးဂျင့်က အရမ်းရိုင်းတယ် မနက် ၇ နာရီ အ်ိပ်ယာကနေ မနိုးသေးဘူး သူတို့ က ဖုန်းခေါ်နေပြီ။ အမေရိကန်အေးဂျင့်ကြတော့ ဂွတ်၊ ဂရိတ်ဆိုပြီး တလလောက်မှ ပြန်ပေါ်လာတော့တယ်။ အိန္ဒိယအေးဂျင့်တွေက စီဗွီကို ဘယ်လိုပြင်လိုက်မယ် ဘယ်လိုပြောလို့သင်တတ်တယ်။ အစကတော့ ခံပြင်းတာပေါ့ နောက်တော့လည်း အလုပ်လိုချင်တော့ သူတို့ ခိုင်းတာ လုပ်ရတာပါပဲ။ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာတဲ့အချိန် ဘယ်နေရာမှာ၊ ဘယ်တော့ ရမယ်မှန်း မသိတော့ အဲဒီအလုပ်ရှာနေတဲ့ အချိန်မှာ ကုန်ကျမဲ့ငွေတွေကို ထည့်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
(အစတုန်းကတော့ ပို့ စ်တပုဒ်ဆိုပြီး ရေးလိုက်တာ အရှိန်ရလာတာနဲ့ပို့ စ်သုံးခု ဖြစ်သွားပါတယ်။ သူများပို့် စ်ရှည်ရှည်ဆို ဖတ်ဖို့ ပျင်းပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ပို့ စ်အရှည်ကြီးတွေ ရေးနေမိတယ်။ မအားတဲ့ကြားထဲက ကိုယ့်ဘလော့ကို အချိန်ပေးပြီး လာဖတ်ပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အပိုင်း ၃ ကို မကြာခင် တင်ပါဦးမယ်။)
ညီမက NTU မှာ ကွန်ပျူတာနဲ့ undergrad တက်နေတာပါ..။
ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်ခဏလုပ်ပြီး အမေရိကန်မှာ မာစတာဆက်တက်ချင်သူပါ..။
အမရဲ့ စာတွေကနေ ဗဟုသုတအများကြီးရပါတယ်..။
နောက်အပိုင်းကို စောင့်မျှော်နေပါ့မယ် :)
အသူကတော့ ကိုယ်တိုင်တော့စာအရှည်ကြိးရေးရမှာပျင်းပြီး သူများတွေရေးထားတဲ့စာအရှည်ကြီးတွေဖတ်ချင်သူပါ။ဗဟုသုတတွေလဲ အများကြီးရပါတယ်။ရေးသာရေးပါ။:) အခွင့်အရေးရရင် USက တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို joinချင်သေးတယ်အမရေ။
အားတယ် အားတယ်...ဖတ်လို့ကောင်းတယ်အမး) ဆက်ေ၇းဦးနော်.. ။
ညီမစန်းထွန်းရေ ဗဟုသုတအများကြီးရပါတယ်။ ဆက်ရေးပါ။